warkii.com » Dhiigga Cusub Ee Lagu Shubayo Barcelona Xili Ciyaareedka Dambe Iyo Magacyada TODDOBA Ciyaartoy Ee Ka Garab Ciyaari Doona Messi
Dhiigga Cusub Ee Lagu Shubayo Barcelona Xili Ciyaareedka Dambe Iyo Magacyada TODDOBA Ciyaartoy Ee Ka Garab Ciyaari Doona Messi
Barcelona ayaa xili ciyaareedka dambe isbeddel weyn lagu samayn doonaa, waxaana iman doonaa ciyaartooyo da’yar oo qaarkood ay kooxdu kasoo bixin doonto lacag badan, kuwaas oo lagu kordhin doono laacibiin yaryar oo kasoo dallacaya kulliyadda da’yarta ee La Masia.
Xili ciyaareedkan ayay Barcelona qaab aan wanaagsanayn ku dhamaysanaysaa, waxaanay maraysaa tababarihii labaad oo isagana la sheegayo in la eryi doono. Quique Setien oo beddelay Ernesto Valverde oo la eryey bishii December, waxa soo baxaysa hadal hayn badan oo ah inuu naadiga hoggaamin doono kaliya kulamada ka hadhay horyaalka LaLiga iyo tartanka Champions League oo ay wareegga 16ka hal lug ugu hadhsan tahay.
Fal ciyaareedka dambe ee 2020/21, waxa Barcelona iman doona saxeexyo cusub oo da’yar oo qaarkood la dhamaystiray heshiiskooda. Francisco Trinao oo 20 jir ah, Matheus Fernandes oo 22 jir ah iyo Pedri oo 17 jir ayay Barcelona lasoo saxeexatay, waxaanay tallaabada xigta u qaadayaan weeraryahanka Lautaro Martinez oo ah 22 jir u ciyaara Inter Milan.
Afartan laacib ayuu qorshaha Barcelona yahay inay ku biiraan Ansu Fati oo 17 jir ah, Riqui Puig oo 20 jir ah iyo Ronald Araujo oo 21 jir ah, kuwaas oo dhamaantood kasoo dallacay kulliyadda kooxda, una soo ciyaarayay heerarka kala duwan ee naadiga, ilaa ay soo gaadheen kooxda koowaad.
Ciyaartoyda Barcelona oo celceliska da’doodu ay waqtigan tahay 28.73 sannadood, waxa laacibiintan da’da yar garab iyo khibradba siin doona oo xili ciyaareedka dambe ay garoonka wadaagi doonaan Lionel Messi oo 33 jir ah, Gerard Pique oo 32 jir ah, Luis Suarez oo 32 jir ah iyo Sergio Busquets oo 31 jir ah, kuwaas oo ka hor inta aanay garoonka ka bixin khibraddooda iyo nooca kubbadeed ee Barcelona looga baahan yahay kusii tallaali doona ciyaartoydan da’da yar.
Frankie de Jong, Nelson Semedo, Jordi Alba, Antoine Griezmann iyo ciyaartoyda kale ee kooxda jooga ayaa iyaguna sii caawin doona, laakiin waxa uu qorshaha Barcelona yahay in laacibiintan da’da yar ay noqdaan dhiigga cusub ee lagu shubayo kooxda.